Translate Myanmar (Burmese) to Irish | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Irish, Myanmar (Burmese) to Irish translations, Myanmar (Burmese) to Irish Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Dia duit, conas atá tú
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? An bhfuil duine ar bith ann?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Is breá liom an oiread sin duit
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Cé mhéadachosnaíonn an hamburger seo?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? An féidir leat tacsaíochtathabhairt dom?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး tá brón orm
တဆိတ်လောက် Gabh mo leithscéal
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို Tá suim agam
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Moill ar mo eitilt
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Tá mé anseo le haghaidh gnó
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Dia duit, is é mo ainm
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Tá brón orm, ach táim pósta
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် Ba mhaith liomaiarraidh ort
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? An féidir leat dul chuig an aerfort?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Cad é an t-am anois, le do thoil?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? Cá bhfuil an stáisiún póilíneachta is gaire?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? An féidir liom do charger fónafháil ar iasacht le do thoil?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? An féidir leat cabhrú liom?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Ordú deoch dom, le do thoil?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Cé mhéidachosnaíonn sé?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး Tá mé ailléirgeach go glútan
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Cuir glaoch ar dochtúir
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော An bhfuil dochtúir ann?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? An féidir liom glaoabheith agam?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Cuir glaoch ar do boss le do thoil.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် Tá an áit seo an-deas
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Tóg dom chuig an óstán le do thoil
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Cad é mo uimhir seomra?